Ifulethi 2 hab en la costa (indawo yokubhukuda) - I-Airbnb
Ifulethi 2 hab en la costa (indawo yokubhukuda)
El Verger, Comunidad Valenciana, i-Spain
U-Jose Luis uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Inefenisha, ihlotshisiwe, ihlanzekile, intsha
Izindawo zokubhukuda zomphakathi ezingu-4, i-terrace Beach yangasese ku-850M (isihlabathi esihle esengeziwe esingu-400M)
Imibhede emibili engu-2 (+ usofa omkhulu)
I-Air conditioning, i-TV43 '
Amathawula, amashidi+iduvethi, amathuluzi asekhishini
i-Lidl 80m kude.
- Ifulethi elingamamitha-skwele angu-75 elinamakamelo angu-2, igumbi lokugezela eliyi-1 elikhulu, igumbi lokuphumula - ikhishi nethala langasese, elilungele imindeni enamalungu angu-5, imibhangqwana eyi-1 noma engu-2 noma iqembu labangane abangafika ku-5.
- Indlu inakho konke okudingekayo futhi ifenisha ukuze ungabi nalutho: imibhede emibili, i-closet, izibuko, usofa we-chasel sofa, itafula lokuphumula, itafula lekhofi netafula lethala, ikhishi eligcwele (ifriji, uhhavini, i-microwave, izinto zokudlela, i-crockery, izingilazi, amapani, amabhodwe, ibhodwe eliveziwe, i-orange juicer, i-blender...). Kukhona nezinye izinsiza ezifana namathawula, amashidi, ama-comforter nezingubo zokulala.
- Ehlobo: ifulethi litholakala endaweni yogu lwe-Mediterranean amakhilomitha angu-8 ukusuka e-Dénia. Kukhona amabhishi akho konke ukunambitheka (isihlabathi esihle, amatshe nama-coves). Ngokuqondile, ifulethi lingamamitha angu-800 ukusuka ebhishi (phakathi kwemizuzu engu-8 no-12 uhamba ngezinyawo, kuye ngejubane). Ngaleso sikhathi, uzothola ibhishi elinesihlabathi elinamatshe, amamitha angu-500 ukuya ngakwesobunxele kunendawo encane yesihlabathi futhi kusukela lapho, amamayela ebhishi lesihlabathi esihle futhi. Ngakolunye uhlangothi, ngakwesokudla uzothola amakhilomitha ambalwa ebhishi nama-pebbles (alungele ukuhamba, ukuthi awunankinga ngesihlabathi ngezinsuku ezinomoya noma isidlo sakusihlwa ogwini ngaphandle kokugcwalisa ukudla kwakho kwesihlabathi). Ngaphezu kwalokho, ogwini unezindawo zokubhukuda ezingu-4 emphakathini ukuze uzijabulele kanye ne-air conditioning ngaphakathi kwefulethi izinsuku ezishisayo kakhulu. Uma ufuna umoya ebusuku, une-Gandia, i-Oliva, i-Denia ne-Javea eseduze, futhi ngokungangabazeki imikhosi ethandwayo yemizana ezungezile
- Ngaphandle kwehlobo: kuhle ukujabulela ukudla kwase-Mediterranean, ukuthula kanye nokuqwala izintaba. Ngisho noma isimo sezulu sisihle, uhamba ebhishi nasemathafeni kuhle.
Indawo enokuthula ezungezwe ibhishi nemizana yasezintabeni
Zonke izinhlobo zokusikisela nokushintshashintsha nezimo ekungeneni nasekuphumeni noma nini lapho kungenzeka
Hlola ezinye izinketho ezise- El Verger namaphethelo